बिन ला.देनलाई एस्तो भनेपछि वि वादमा तानिए प्रधानमन्त्री इमरान खान। – Namaste Dainik
बिन ला.देनलाई एस्तो भनेपछि वि वादमा तानिए प्रधानमन्त्री इमरान खान।
June 26, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बिन ला.देनलाई एस्तो भनेपछि वि वादमा तानिए प्रधानमन्त्री इमरान खान।
एजेन्सी । पाकिस्तानको राष्ट्रियसभामा बिहीबार प्रधानमन्त्री इमरान खानले ओशामा बिन लादेनलाई सहिद भनेका थिए । यही विषयलाई लिएर उनलाई सांसद्हरुले घेरेका छन् । उनको यो भाषणको क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
पाकिस्तानको विपक्षी पार्टी पिएमएल–एनका नेता ख्वाजा आसिफले राष्ट्रियसभामा बनेका छन्,‘इमरान खानले ओशामा बिन लादेनलाई सहिद भने । बिन लादेनले हाम्रो जमिनमा आतंकवाद ल्याएका थिए । उनी आतंकवादी हुन् र तपाईं उनलाई सहिद भन्दै हुनुहुन्छ ।’
पाकिस्तानमा इमरान खानको यस टिप्पणीबारे विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्रीका विशेष सचिव डाक्टर शाहबाज गिलले ट्वीटरमार्फत उनको बयानको बचाउ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्,‘अनुचित तरिकाले प्रधानमन्त्रीको बयानलाई विवादित बनाउने कोसिस गरिँदैछ । प्रधानमन्त्री इमरान खान आतंकवादविरुद्ध प्रतिबद्ध छन् । इमरान खानले दुईपटक भाषणमा ओसामा किल्ड शब्द प्रयोग गरेका छन् ।
के भनेका थिए इमरानले ?
बिहीबार राष्ट्रियसभामा आफ्नो भाषणमा इमरानले भनेका थिए,‘हामीले आतंकवाविरुद्धको लडाँइमा अमेरिकालाई समर्थन गर्नुका बाबजुद अपमान झेलेका छौँ । अमेरिका अफगानिस्तानमा असफल भयो, तब हामीलाई दोष लगाइयो । अमेरिका एबोट्टाबादमा आयो र उसले ओशामा बिन लादेनलाई मारिदियो । सहिद बनाइदियो । यसपछि पुरै दुनियाँमा हाम्रो स्थिति के भयो ? जोकोहीले हामीलाई घृणा गर्न थाले ।’
पाकिस्तानी सांसद् तथा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका प्रवक्ता मुस्तफा नवजाल खोखरले पनि खानको बयानको निन्दा गरेका छन् । उनले यस बयान राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको बताए । नवाजले भनेका छन्,‘इमरान खानको बयानले धेरै दुःख लागेको छ । यस्तो लाग्छ कि यो देश कसको हातमा थमाइएको छ । उनको बयानबाट यो लाग्छ कि उनी आफैं देशको सुरक्षाका लागि खतरा बनेका छन् ।’
उनले अगाडि भनेका छन्,‘आज उनलाई ओशामा बिन लादेन सहिदजस्तो लाग्छन् । तर,ती परिवारलाई हामी के जवाफ दिन्छौँ जो अल कायदाको हमलामा सहिद भएका छन् । हाम्रो देशमा नौजवानको जो नस्ल छ,त्यसलाई के भन्ने कि उनीहरु त्यही बाटो अख्तियार गरुन्,जसलाई ओशामा बिन लादेनले अपनाएका थिए ।’ईस्लामिक विद्रोही संगठन अलकायदका संस्थापक ओशामा बिन लादेनलाई २०११ मा अमेरिकाले विशेष अपरेशनका दौरान पाकिस्तानको एबोट्टोवादस्थित एक घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा मारेको थियो ।
भारतीय मीडिया को रुवाबासी भन्छन;लिपुलके छोड़न चीनले दबाब दियो ।
काेराेना महामारीमा क्षेत्रीय संगठन निष्प्रभावी